Horudhac: Mallorca vs Real Madrid… (Los Blancos oo sii haysan karta hoggaanka horyaalka La Liga) – Gool FM
(Mallorca) 19 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dib ugu soo laabanaysa caawa ciyaarista horyaalka La Liga kaddib ciyaaraha caalamiga ah, waxaana ay u safrayaan naadiga Mallorca.
Kooxda uu hoggaamiyo tababare Zinedine Zidane ayaa halka ugu sarreysa horyaalka La Liga ku fadhisa 18-dhibcood oo ay la timid siddeedii kulan ee ugu horreeyey horyaalka oo ay dheeshay.
Los Blancos ayaa guuldarro la’aan ah xilli ciyaareedkan illaa iyo hadda, waxaana ay doonaysaa inay sii dheereysato rikoorkaas marka ay booqanayso Mallorca oo ka mid ah kooxaha la soo dallacsiiyey, iyadoo Real kooxaha ay xafiiltamaan ee Barcelona iyo Atletico Madrid ay xilli hore ee maanta ciyaarayaan.
Real Madrid ayaa haddii ay adkaato kulankan dib ula wareegi karta hoggaanka horyaalka La Liga haddii ay Barcelona si ku meel gaar ah hoggaanka ula wareegto haddii ay guul ka gaarto Naadiga Eibar.
Garoonka: Estadi de Son Moix
Fran Gamez ayaa la filayaa inuu heli doono inuu ku soo bilowdo daafaca garabka bidix kulankan ay caawa ciyaareyso kooxdiisa Mallorca.
Antonio Raillo ayaa taam ahaanshihiisa dib u heli kara waxaana uu diyaar u yahay loo soo xusho booska daafaca dhexe ee kooxda martigeliyeyaasha.
Aleix Febas ayaa dhankiisa la filayaa inuu khadka dhexe ka buuxiyo Takefusa Kubo markale.
Dhinaca kale kooxda Real Madrid waxaa shaki laga galinayaa kulankan xiddigaheeda Toni Kroos iyo Luka Modric oo labaduba ku dhaawacmay ciyaarihii heerka caalami oo ay metelayeen dalalkooda.
Isco iyo Fede Valverde ayaa la filayaa inay kula soo bilaaban doonaan khadka dhexe Casemiro.
Marcelo ayaa la rajaynayaa inuu ku soo bilowdo garabka bidix ee daafaca, halka James Rodriguez uu ku soo bilaaban karo garabka midig ee weerarka, maadaama Gareth Bale uu ka cabanayo dhaawac yar oo kubka ah.
>- Kooxda Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan 4 gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday kooxda Mallorca tartammada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa guul gaartay shantii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxda Mallorca dhammaan tartammada.
>- Los Blancos ayaan laga adkaan siddeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Ligaha Spain.